दुखद खबर : सरस्वतीको मुर्ती सेलाउन जादा स्कुल बस दुर्घटना २९ विद्यार्थीको मृत्यु ! « Onlinetvnepal.com
दुखद खबर : सरस्वतीको मुर्ती सेलाउन जादा स्कुल बस दुर्घटना २९ विद्यार्थीको मृत्यु !
Published : 11 February, 2019 1:02 pm
सरस्वतीको मुर्ती सेलाउन जादा स्कुल बस दुर्घटना २९ विद्यार्थीको मृत्यु #RIP लेखी एक सेयर गरौं!! हिजो सरस्वती पुजा मनाएर आज मुर्ती सेलाउन लाने क्रममा एउटा स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुँदा अधिकांश केटाकेटी सहित कम्तीमा २९ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ।
उत्तरी राज्य हिमांचल प्रदेशमा एउटा स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुँदा कम्तीमा २९ जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। ‌ज्यान गुमाउनेहरुमध्ये अधिकांश १० वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु भएका बताइएको छ। सरस्वती पुजाको मुर्ती सेलाउन जाने क्रममा स्कुले बस दुर्घटना भएको थियो । इन्जिनबाट छुट्टिएर यात्रुवाहक रेल उल्टो कुद्दा…काँगडा जिल्लाको नुरपुर सथित वजीर रामसिंह पठनीय मेमोरियल स्कुलका झण्डै ४० जना विद्यार्थीहरुलिएर गैरहेको बस दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो।
एएफपी समाचार संस्थासंग कुरा गर्दै एक स्थानीय प्रहरी अधिकारीले भने, “उक्त स्कूल बस सडकबाट झण्डै २०० फिट तल गहिरो खोंचमा खस्दा २७ जना ‌विद्यार्थी, दुईजना शिक्षक तथा बस चालकको पनि ज्यान गयो। उद्धारकर्मीहरु घटनास्थलमा पुगिसकेको जनाइएको छ।
अधिकारीहरुले सो दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन आदेश दिएका छन्। भारत संसारमै सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटना हुने मुलुकहरुमध्ये एक हो। चालकको लापरवाही तथा सडक एवम् सवारी साधन राम्रोसंग मर्मत नगरिंदा अधिकांश दुर्घटनाहरु हुने जानकारहरु बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोला:- ४ वर्ष नियमित सम्भोग गर्दा पनि महिला भर्जिन,कारण जान्दा डाक्टरले हाँसो रोक्न सकेनन्
एजेन्सी – चीनको मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित समाचार अनुसार चीनको एक शहरमा एक दम्पतीले बिहे गरे पछि नियमित ४ वर्षसम्म सम्भोग गरि रहदा पनि महिला गर्भवती नभए पछि हाम्रो बच्चा भएन भनि डाक्टरकहाँ समस्या लिएर गए । ति दम्पतिले आफ्नो कुरा डाक्टरलाई भने कि हामिहरुल नियमित रुपमा सधै सम्भोग गछौ तर पनि गर्भ रहन सकेन ।
यस्तो कुरा डाक्टरलाइ भनिसकेपछि डाक्टरले महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरे।स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हेर्दा उनीमा बच्चा जन्माउन सक्ने कुरा जनाइ कुनै कमजोरी देखिएन भनि बताए । बरु डाक्टरले भने अर्कै नौलो कुरा पत्ता लगाए । डाक्टरले जाँच गरेपछि थाहा पाए कि ती महिला त अझैसम्म कुमारी नै थिइन् ।
चीनको मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित समाचार अनुसार परीक्षण गरिसकेपछि डाक्टर छक्क परेका थिए किनकि ती दम्पतीले ४ वर्षदेखि नियमित सम्भोग गरिरहेको कुरा जनाएका थिए । यति हुँदाहुँदै महिला कसरी भर्जिन हुन सक्छििन् त रु यि सबै कुरा थाहा पाएपछि डाक्टरले उनीहरुसँग सम्भोग कसरि गर्नुहुन्छ भनि सम्भोगको तरिकाको बारेमा सोधे त्यसपछि उनीहरुको जवाफ सुनेर हाँसो थाम्न सकेनन्, डाक्टरको होसहवास उड्यो ।
किनकि उनीहरुले कहिल्यै प्राकृतिक तरिकाले सम्भोग गरेकै थिएनन् । वास्तवमा ती लोग्नेस्वास्नीमा सम्भोगको बारेमा निकै अनभिज्ञता रहेको पाइयो । महिलाका अनुसार उनका लागि सम्भोग निकै पीडादायक हुने गरेको छ । २६ वर्षका पति र २४ वर्षकी जवान पत्नीले आफ्नो समस्याका बारेमा बताउँदा डाक्टरहरु नै अचम्ममा परे ।
लोग्नेस्वास्नीले नियमित प्राकृतिक सम्भोग नगरि गुँदामैथुन, मुखमैथुन तथा हस्तमैथुन जस्ता अप्राकृतिक यौनक्रिडाहरु गर्दा रहेछन् ।गर्भ रहनका लागि योनी र लिंगबीचमै सेक्स हुनुपर्दछ भन्ने कुरा जानकारी नरहेको थाहा पाउँदा डाक्टर अचम्म परे।यसरी प्राकृतिक रुपमा यौनांग सम्भोग नगरीएकि पत्नी चाहीँ चार वर्षको नियमित यौनक्रिडापश्चात् पनि भर्जिन नै रहन सफल भइन् ।
चीनको मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित समाचार अनुसार परीक्षण गरिसकेपछि डाक्टर छक्क परेका थिए किनकि ती दम्पतीले ४ वर्षदेखि नियमित सम्भोग गरिरहेको कुरा जनाएका थिए ।
यति हुँदाहुँदै महिला कसरी भर्जिन हुन सक्छििन् त रु यि सबै कुरा थाहा पाएपछि डाक्टरले उनीहरुसँग सम्भोग कसरि गर्नुहुन्छ भनि सम्भोगको तरिकाको बारेमा सोधे त्यसपछि उनीहरुको जवाफ सुनेर हाँसो थाम्न सकेनन्, डाक्टरको होसहवास उड्यो । किनकि उनीहरुले कहिल्यै प्राकृतिक तरिकाले सम्भोग गरेकै थिएनन् ।
वास्तवमा ती लोग्नेस्वास्नीमा सम्भोगको बारेमा निकै अनभिज्ञता रहेको पाइयो । महिलाका अनुसार उनका लागि सम्भोग निकै पीडादायक हुने गरेको छ । २६ वर्षका पति र २४ वर्षकी जवान पत्नीले आफ्नो समस्याका बारेमा बताउँदा डाक्टरहरु नै अचम्ममा परे ।